fahasalaman'ireo mpilalao sy ny mpijery nohon'ny fisian'ity Coronavirus ity dia manaitra ny avy ao amin'i CAF ny tenany fa ho zava-doza hoan'ny mpilalao sy ny mpijery raha ho tanterahina io lalaon'ny Barea sy Côte d'Ivoire ny 27 sy 31 martsa io satria efa miparitaka be any Eoropa ny COVID-19 ka mety ho mora ny hiparitahan'izany aretina izany ho an'ny firenena mpampian-trano ny lalao dia namoaka ny fanapahan-keviny ny kaonfederasionina afrikanin’ny baolina kitra. Nihemotra tamin’ny fanambarana izay nataony ny 11 martsa ny amin’ny hanatanterahana ny lalao ihany ny CAF satria dia nisy ny fanambarana nataon’ity rafitra iraisampirenena ity fa haato indray ny lalao rehetra saika ho notontosaina ny faran’ity volana ity, izany hoe ny fihaonan’ny Barean’i Madagasikara sy ny Elefantan’I Cote d’Ivoire. Isan’ny fanontaniana mipetraka ny hoe noho ny antsoavo nataon’ny minisitra tokoa ve no nandraisana ny fanapahan-kevitra? Na izany aza anefa aloha dia mahagaga ihany ny tsy fitoviam-pijery eo anivon’ny fitondram-panjakana foibe satria misy minisitra hafa milaza fa tsy mbola ilaina ny manakatona ny sisin-tanintsika. Ny minisitry ny fanatanjahantena anefa io milaza fa loza ny mbola hananatanterahana ireo lalao voalaza teo ny faran’ny volana izao.